UEFA Ayaa Xaqiijisay Inay Qorsheyneyso Inay Mamnuucaan Koox Kasta Iyo Ciyaaryahan Kasta Oo Ku Lug Leh European Super League
HomeHoryaalada KaleUEFA ayaa xaqiijisay inay qorsheyneyso inay mamnuucaan koox kasta iyo ciyaaryahan kasta oo ku lug leh European Super League
April 19, 2021 Horyaalada Kale, Wararka Ciyaaraha 0
Laba iyo toban ka mid ah kooxaha ugu waa weyn adduunka ayaa bayaan ay soo saareen fiidnimadii Axada waxay ku xaqiijiyeen inay doonayaan inay dhisaan European Super League cusub.
Warbixin ay si wada jir ah u soo saareen ayay ku shaaciyeen: “Laba iyo toban ka mid ah kooxaha ugu caansan Yurub ee kubada cagta ayaa maanta isu yimid si ay u shaaciyaan inay ogolaadeen inay dhisaan tartan cusub oo bartamihii isbuuca ah, Super League, oo ay maamusho Naadiyadeeda Aasaasiga ah.
“AC Milan, Arsenal FC, Atletico de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, ​​FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF iyo Tottenham Hotspur intuba waxay ku biireen Naadiyada Aasaasayaasha.
“Waxaa la filayaa in seddex kooxood oo kale ay ku soo biiraan ka hor xilli ciyaareedka furitaanka, kaas oo loogu talagalay in lagu bilaabo sida ugu dhaqsaha badan.
“Horey ayaan usocdaa, Naadiyadaha Aasaasayaasha waxay rajeynayaan inay wadahadal la yeeshaan UEFA iyo FIFA si ay uga wada shaqeeyaan iskaashi si loo gaarsiiyo natiijooyinka ugu wanaagsan Horyaalka cusub iyo guud ahaan kubada cagta.”
UEFA ayaa si adag uga soo horjeedo fikradaas waxayna ku jawaabeen iyagoo sheegaya in koox kasta iyo ciyaartoy kasta oo ku lug leh Super League ay wajihi doonaan mamnuucida tartamada UEFA iyo FIFA.
Waxay yiraahdeen: “Naadi kasta iyo ciyaaryahan kasta oo ka qeyb galaya Super League waxaa laga mamnuuci karaa dhammaan tartamada UEFA iyo FIFA, heer Yurub ama heer caalami.”